कथा : नारीको व्यथा | Ratopati
personकल्पना नेपाल आचार्य exploreकाठमाडौं access_timeअसार ४, २०७८ chat_bubble_outline0
भावना कूलघरानाका छोरी हुन् । भर्खरै १२ को परीक्षा सकेर घरमा छिन् । उनको जवानी दिन प्रतिदिन फुल्दै जान थाल्यो । कति लजालु स्वभावकी ! पढ्नमा पनि तेज, घरधन्दामा त्यत्तिकै सिपालु । लगनशील भन्दै आफन्तहरुले भावनाको निकै तारिफ गर्न थाले ।
भावनाका श्रीमानले पुन दुबई जाने निधो गरे । त्यसै गाउँका जमिन्दार विरुले श्रीमतीसँगको यौनको भोक मेट्न नपाएको कारण भावनाको रुप र जवानीमा आँखा लगाइरहेको थियो । उसलाई के खोज्छस्.... आँखा भने झैँ भयो । र, भावनाका श्रीमानलाई चाहिने जति रकम ऋण दिएर विदेश पठाए ।
विरु भावनाको जवानीमा रयाल् छोडिरहन्थ्यो । एकदिन आफ्नै श्रीमतीसँग उसले पीडा पोख्यो । तिमी रोगी, तिमीसँग शारीरिक सम्पर्क गर्न पाउँदिन । मेरो शारीरिक आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने ? लाग्छ, म त कुनै भट्टी र यौन ब्यवसायीकोमा पुगेर यौन तृष्णा पूरा गरुँ ।
एकछिन मौन रहेकी भावनाले बर्षौंदेखिको श्रीमानसँगको बिछोड, गरीवीको चपेटा, बुबाको पीडा, भाइको पढाइ, घरको दु.ख, यौनको भोकलगायत सबै एक–एक गरी सम्झिइन् । र, उनले मौन स्वीकृती दिइन् ।
केही समयपछि भावनाले एक छोरीलाई जन्म दिइन् । अहिले छोरी र भावना घरमै छन् । श्रीमान कोरियामा छन् । नारीहरूको कथाभित्रको कथामा बाँचिरहेकी छन् भावना ।
देश, सपना र सेतो बाकस